Yini isiphepho somlilo, sakhiwa kanjani futhi iyini imiphumela Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela lapho uzwa nge isiphepho somlilo uyihlobanisa nohlobo lwento yokufakelwa. Kodwa-ke lezi yiziphepho ezivuthayo ezinamandla ezenzeka ngokwemvelo. Imvamisa zenzeka lapho kwenzeka umlilo omkhulu wehlathi. Isibonelo, izibonelo ezimbalwa zalezi zenzakalo zinikezwe emlilweni wase-Australia.
Kule ndatshana sizokutshela zonke izici, umsuka kanye nemiphumela yesiphepho somlilo.
1 Yini isiphepho somlilo
3 Kuqoshwe iziphepho zomlilo
4 Umlilo weTornado nokuguquka kwesimo sezulu
Yini isiphepho somlilo
Lapho umlilo omkhulu wehlathi uvela, kudingeka umoya omoya onamandla ukuze kwenzeke isiphepho esivuthayo. Emililweni eyenzeka e-Australia, ukubonakaliswa okuthusa kakhulu kwemililo kwabonwa. Futhi imayelana nokwakhiwa kwe- iziphepho eziningana ezivuthayo phakathi nemililo. Lezi zimo akujwayelekile ukuzibona emathafeni ase-Australia kodwa ziba yingozi kakhulu ezimeni lapho imililo itholakale khona.
Iziphepho zomlilo zibizwa nangokuthi ama-firenado futhi azihlanganise lutho neziphepho ezijwayelekile. Ukwakheka kwayo kungenxa yokuthi lapho kukhona ukuhlangana phakathi kokushisa okukhulu ngenxa yamazinga okushisa aphezulu enza inhlabathi igcine ukushisa okuningi. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwamazinga okushisa lapho umhlaba uhlushwa khona umlilo kubangela ukuba kuhlangane nongqimba lomoya opholile owela phezu kwawo. Njengoba umoya ofudumele ungencane ujwayele ukukhuphuka futhi le gradient yezinga lokushisa, edala umehluko, ibangela ukuthi kukhiqizwe ikholomu yomoya ekhuphuka ngokushesha bese iqala ukuzungeza.
Uma ikholomu yomoya oshisayo ihlangana nendawo lapho umlilo wenzeka khona uthe ikholomu yomoya izodonsa umlilo odale isiphepho somlilo. Njengoba ithola isivinini esikhulu, isiphepho siqala ukubhubhisa wonke amalahle nezinto ezivuthayo. Lo mbhoshongo womlilo owakhiwe unamandla amakhulu okulimala njengoba uqeda yonke indlela yawo.
Njengoba sibonile, kuthatha izinga lokushisa ukusuka emhlabathini ukuya emoyeni ukuze kwenzeke isiphepho somlilo. Ngokuyinhloko siyabona ukuthi izinga lokushisa lomhlabathi liphakeme kakhulu kunalelo lomoya obandayo ukuphakama. Lokhu kubangela ukuthi umoya ominyene uvuke ngamandla. Lezi zinkanyamba zingafinyelela amazinga okushisa angaphakathi afinyelela kuma-degree ayi-1.500. Kungakho benamandla amakhulu kangaka.
Esinye isici lezi ziphepho ezinaso yijubane ezingahamba ngazo. Kuya ngombuso womoya futhi amandla omlilo angakhiqiza imimoya efinyelela kuma-250 km / h. Lesi sivinini sincike nomehluko wokushisa okhona phakathi komhlaba nomoya ngobude. Uma kukhulu umehluko kulezi zinto ezeqisayo, ngokushesha izivunguvungu zizohamba futhi umoya uzokhuphuka.
Lezi zivunguvungu ezivuthayo zidale umonakalo omkhulu emililweni yase-Australia. Yize imililo nemililo kuyingxenye yomjikelezo wemvelo wamahlathi, ukuguquka kwesimo sezulu kuyasheshisa lezi zinqubo. Isibonelo, ihlobo elide, amazinga aphezulu okushisa nokushisa okukhulu kwenzeka, efinyelela amanani ama-degree angama-50 ezindaweni eziningi. Njengoba sishilo ngaphambili, lapho kukhula izinga lokushisa elidala phakathi kwenhlabathi nomoya obandayo endaweni ephakeme, kukhula amathuba okuba lezi zehlakalo ezimbi kakhulu. Futhi iqiniso ukuthi uma imililo iba miningi lapho futhi iphakama izinga lokushisa, lezi ziphepho zomlilo zingenziwa ngemvamisa enkulu namandla.
Kuqoshwe iziphepho zomlilo
Iningi lazo zonke iziphepho ezinkulu ezivuthayo ezenzeke emhlabeni zivele ngenxa yomlilo wequbula. Kule micimbi singathola imisinga yomoya ofudumele ekhuphukayo futhi eguqukayo. Lezi zinkanyamba ngokuvamile zinezindawo eziphakeme eziphakathi kwamamitha ayi-10 no-50 ukuphakama namamitha ambalwa ububanzi. Esinye sezici lesi siphepho esaziwa ngaso isikhathi esifushane. Kuhlala kuphela imizuzu embalwa. Kodwa-ke, yize isikhathi sabo sifinyeziwe, ijubane labo abakha ngalo nokuthi bahamba nini lidala umonakalo omkhulu.
Ezinye zeziphepho ezivutha amadlingozi ezivuthayo emlandweni wonke zenzeka phakathi neMpi Yezwe II. Zenzeka emadolobheni aseJalimane afana neHamburg ngesikhathi se-Operation Gomorrah, lapho kwafa khona abantu abangu-43. Futhi ngesikhathi seDresden Bombing, esasusa isishingishane esilingana nedolobha elincane futhi sakhipha isivunguvungu somlilo yabulala abantu abaphakathi kuka-25 40 no-XNUMX, ngaphezu kokubhubhisa isigamu somuzi.
Umlilo weTornado nokuguquka kwesimo sezulu
Kumele kubhekwe ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kungaguqula izimo zezemvelo emhlabeni wonke. Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunebhalansi yaso ngokuya ngenani lemisebe yelanga esiyithola njalo. Le radiation yelanga ibangela iningi lezimo zezulu emhlabeni jikelele. Ngokuya ngenani lemisebe yelanga efinyelela kithi, kunombuso owodwa noma omunye.
Kulokhu sengeza ukugcinwa kokushisa ngamagesi abamba ukushisa. Ukwanda kwala magesi emkhathini yikho okwenza ukwanda kwamazinga okushisa emhlabeni jikelele. Isici esiyinhloko salezi gesi amandla amakhulu okugcina ukushisa. Ngokuba nokushisa okwengeziwe ngokuqhubekayo kuthinta konke okuguquguqukayo kwesimo sezulu nokusebenza kwaso.
Yile ndlela izimo zezulu ezimbi kakhulu ezenzeka ngayo ngamandla amakhulu. Izimo esizibhala njengezomiso, izikhukhula, izimvula ezinkulu, amagagasi okushisa, njll. Ngalezi zimo, izehlakalo eziyingozi kakhulu njengeziphepho zomlilo ziba njalo. Lapho izinga lomlilo liphakama, maningi amathuba okuthi eyodwa yalezi zimo yenzeke.
Njengoba ukwazi ukubona, lezi zimo ezimbi kakhulu zingadala umonakalo omkhulu futhi zithuthukiswe yimiphumela yokuguquka kwesimo sezulu. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesiphepho somlilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Isiphepho somlilo
Imodeli ye-athomu kaRutherford